Khoros Marketing: Social Media Marketing & Nchịkwa Maka Enterlọ Ọrụ | Martech Zone
Khoros na-enyere nnukwu ụdị aka ịhazi, chịa, bipụta, ma tụọ mgbasa ozi mgbasa ozi mmekọrịta na-ebute nsonaazụ azụmahịa.
Etu otu Khoros 'Social Media Platform si enyere Enterprise
Otu arụmọrụ - Weta otu gị niile, ọwa gị na ọdịnaya gị n'otu usoro ikpo okwu dị mfe. Jikwaa mkpọsa mgbasa ozi mgbasa ozi mgbasa ozi na mkparịta ụka oge na otu dashboard na arụmọrụ na visibiliti dị ukwuu.
Bulie ọdịnaya gị - Imekọ, atụmatụ, ma jikwaa mgbasa ozi mmekọrịta ezubere iche nke na-akpali njikọ na ndị na-ege gị ntị.
Ejikọta echiche nke arụmọrụ - Layer azụmahịa onodu maka mmekọrịta mmadụ na ibe ya kacha metụta azụmahịa gị. Configurable dashboards na data siri ike na-ebupụ na-enyere gị aka iwepụ obere oge ịwepụta usoro na oge na-emepe emepe mkpọsa nke na-eme ka azụmahịa nwee mmetụta.
Ọchịchị na nnabata - Na-agbagharị olu olu na-agbanwe agbanwe, nke bụ eziokwu iji bulie ntụkwasị obi n'etiti ndị na - ege gị ntị. Ihụhụ ihu na ịchịkwa nnweta akaụntụ gị, nkwado ọdịnaya, na ndị otu pụtara ichebe akara nha na ọkwa.
Khoros Social Media Marketing na Ntị
Bulie akara gị elu site na ịre ahịa mgbasa ozi mgbasa ozi, itinye aka na ndị ahịa, nchedo akara na visibiliti na njikwa maka ịdị adị nke mmekọrịta gị na ibe gị, ma tụọ ihe dị mkpa maka akara gị na nyocha nke mmekọrịta mmekọrịta na-ejikọ mmekọrịta mmadụ na azụmahịa.
Khoros Social Media ọgụgụ isi
Gaa n'ihu ahịa gị, asọmpi gị, na ndị na-ege gị ntị na nghọta dị ike, mana ịnweta. Na-ebuli mgbasa ozi site na nghọta banyere ndị na-ege gị ntị, ọdịnaya, na ahịa. Jikwaa oge ọ bụla nke nsogbu jiri nkà na-enye ekele maka data oge ọ bụla, na ọgụgụ isi ịsọ mpi elu iji mee ka akara gị pụta.
Khoros Social Media Ahụmahụ
Dozie ma kesaa ọdịnaya mmekọrịta gị na mepụta ahụmịhe ndị masịrị gafee akara aka dijitalụ gị. Ebumnuche Khoros bu ihe eji eme ka ndi mmadu tinye aka na oru ha - n'agbanyeghị ebe ndi ahia gi no. Khoros mmekọrịta ọha na eze njikọta gụnyere Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, na Pinterest Njikọ ọrụ ndị ahịa gụnyere Google Business na Apple Business.
Rịọ Khoros Marketing Demo
Tags: curate elekọta mmadụ mediaKhoros Enterprise Social Media Marketingmgbasa ozi mgbasa oziSocial Media Marketing